Repository ao amin'ny rafitray Ubuntu: amboary ary ovao izy | Ubunlog
Ity lahatsoratra ity dia natokana ho an'ireo vao manomboka amin'ny fizarana ary indrindra amin'ny tontolon'ny GNU / Linux.
Androany isika dia hiresaka momba ny iray amin'ireo rakitra manan-danja indrindra ao ny tontolon'ny GNU / Linux. Miresaka ilay fisie izahay Sources.list . Ny anaran'ity fisie ity dia efa tena manome aingam-panahy sy manondro izay mety ho izy, anglisy kely fantatsika.
Ny fiasan'ny fizarana Gnu / Linux dia tsotra, manana ny singa amin'ny rafitra fiasa etsy ankilany isika ary amin'ny lafiny iray dia manana fifandraisana azo antoka amin'ny mpizara iray izahay izay omena ny rafi-pandaharana miaraka amina programa, fonosana ary fanavaozana. Ity kalitao ity izay paranoida maro momba ny fandriam-pahalemana dia mety ho toa lavaka be dia iray amin'ireo toetra tsara indrindra ananany ary ahafahan'ny fizarana mihatsara isan'andro.
Ubuntu manana andiana serivera ary andiana fampiharana izay ahafahantsika manavao sy miantoka ny rafitra fiasanay ary koa manatsara ny fifandraisanay sy ny fanavaozana ny zavatra niainantsika, kanefa na izany aza, ny tena fanolorana azy dia ny fanontana amin'ny tanana an'ity rakitra ity.
1 Ahoana no fanitsiana sy fanatsarana ny rakitra Loharano. List?
3 Ary ahoana no fomba hanampiako trano fitahirizam-boky nolazain'ny namako tamiko?
4 Ary ahoana no ahalalako fa trano fitehirizana manan-kery io?
Ahoana no fanitsiana sy fanatsarana ny rakitra Loharano. List?
Ny fanovana rakitra toy izany dia tena mora fa miaraka amin'izay dia ilaina ny manao azy amin'ny alàlan'ny alalana avy amin'ny mpitantana.
Ny fanontana diso na famafana ny fampahalalana dia mety hahatonga ny rafi-piasana tsy miova ary mety hahatonga azy tsy hiasa mihitsy aza. Fomba iray fiarovana tsara ny fanokafana ny fisie amin'ny azon'ny gedit, alao ny vaovao ary apetaho ao anaty takelaka lahatsoratra LibreOffice na hafa azon'ny gedit. Be tokoa ubunlog satria tsy tompon'andraikitra amin'ny zava-mitranga aho na dia betsaka aza ny Lisitra loharanom-baovao Ubuntu.
Manokatra ny terminal izahay ary manoratra
Hanontany anay ny tenimiafiny izy ireo ary aorian'ny fanamafisana izany dia hisokatra ny efijery Gedit miaraka amin'ny lahatsoratr'ilay rakitra. Mety diso ny tsipelina tsipelina ataonay etsy ambony, dia takelaka banga no vokany, ary hakatonantsika tsy ampirimina sy ampidirina kitay.
Raha manana isika Ubuntu 12.10 na 12.04 na nanavao ny ny 12.10 Hiseho miaraka amin'ireto manaraka ireto ny fisie
Ny tsipika voalohany misy ny teny cd-rom dia firesahana amin'ny cd fametrahana, miaraka amin'ny teny hoe "deb cdrom:”Na dia napetraka tamin'ny alàlan'ny tambajotra na usb aza. Manomboka eto dia manomboka miseho ny tsipika maro izay manomboka amin'ny "deb http: //"Na"deb-src”. Ny tsipika voalohany dia manondro ny adiresy ara-batana an'ny mpizara na fitoeram-bokatra, izay no anarana nomena ny mpizara izay misy fonosana. Ny tsipika faharoa dia manondro ny làlan'ny loharanon'ireo programa.
Ho fanampin'izay dia hisy tsipika izay manomboka ##. Ireto andalana ireto dia tsipika misy hevitra izay mety misy lahatsoratra manazava ny trano fitehirizana manaraka na trano fitahirizana entana izay tsy tadiavintsika ny fidiran'ny rafitra fiasanay. Na izany na tsy izany, rehefa mahita ireo marika ireo eo am-piandohan'ny tsipika ny rafitra dia mahatakatra fa ny manaraka dia tsy ilaina ary mitsambikina amin'ny andalana manaraka izay tsy manomboka amin'ity famantarana ity.
Indraindray rehefa simba vonjimaika ny tahiry na tsy tadiavinay ny hametrahana ny kinalan'ny programa avy amin'izany tahiry izany dia ny safidy tsara indrindra dia ny fametrahana an'io famantarana io eo am-piandohan'ny tsipika fitehirizana ary hijanona tsy hanana olana isika. Mitandrema, raha maneho hevitra amin'ny tahiry ianao, izany hoe apetraho eo am-piandohan'ny adiresy mpizara ny #, dia tokony haneho hevitra momba ny adiresy loharano koa ianao, raha tsy izany dia hanome lesoka izany.
Ary ahoana no fomba hanampiako trano fitahirizam-boky nolazain'ny namako tamiko?
Mba hanampiana tahiry iray dia mila mankany amin'ny faran'ny antontan-taratasy izahay ary mametraka ny adiresy ny tahiry ary ny adiresy loharano, izany hoe ny deb sy deb-src.
Ary ahoana no ahalalako fa trano fitehirizana manan-kery io?
Ny adiresy tahiry rehetra dia manana an'ity endrika ity:
Deb http://direccion_del_servidor/nombre_carpeta version_name (main na univers na multiverse na main restré, sns)
Ity tapany farany amin'ny tsipika ity dia manondro ireo fizarana ao amin'ny tahiry: tena no lehibe, raha voafetra lehibe manondro fizarana rindrambaiko voafetra.
Ny fepetra tokana tsy maintsy raisina ao anatin'ity rakitra ity dia amin'ny ankapobeny ny manandrana mametraka repositories amin'ny dikan-teny mitovy, izany hoe, raha manana Ubuntu 12.10 isika ao amin'ireo trano fitahirizana dia tsy maintsy hiseho "habetsahana"(Io foana no teny voalohany amin'ny fizarana) raha tsy izany, dia mety hitera-doza isika fa rehefa manavao dia mampifangaro fonosana sy kinova ny rafitray ary lasa adala tonga any amin'ny fanjakan'ny"fanaparitahana tapakaIzay rehefa tsy mandeha tsara ny rafitra fampiasana repository.
Raha vantany vao napetrakao araka ny itiavantsika azy ireo repositories dia mila manangona sy manidy fotsiny isika. Mandeha amin'ny console izahay ary manoratra
Fanavaozana an'i Sudo
Ary noho izany dia hanomboka ny fanavaozana ny lisitry ny fonosana izay eken'ny rafitra miasa.
Raha namaky ny Tutorial iray manontolo ianao dia ho hitanao fa tsotra izany, farafaharatsiny mba andramo jerena ny fisie. Mendrika. Miarahaba.
Fanazavana fanampiny - Ahoana ny fomba hanampiana tahiry PPA amin'ny Debian sy ny fizarana mifototra amin'izany,
Sary - Wikipedia
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Tutorials » Ny lisitry ny Repository sy ny loharanom-pahalalana Ubuntu
Misaotra, Merci, Tanke, Misaotra, noterena….
Salama, vaovao aho amin'ity, fa mitady izany rehetra izany aho, tsy mila zavatra hafa hianarana.
Lazaiko aminao, rehefa tonga any amin'ny toerana misy ny kanonika…. tsara, mandeha tsikelikely aho… .Fifanitsiana rafitra - Rindrambaiko sy fanavaozana - Rindrambaiko hafa - Tondroiko ny Canonical Partners (2) mahaleo tena (1) - ampio, ary eto aho mandika sy mametaka ny tsipika hita etsy ambony ho ohatra hametaka io no anontaniako APT, Add loharano, ary Refresh na zavatra mitovy aminy, ary amin'ny farany dia lazainy amiko fa tsy mahomby izy io noho ny fifandraisana, rehefa manana fifandraisana aho ... ary niditra tao amin'ny loharanom-baovao aho. , ary naka pikantsary raha sendra izany, ary misy tsipika maromaro izay hiafarany amin'ny ankapobeny, ary toy ny milaza amiko fa misy zavatra tsy mety ... ary izaho ... tsy misy hevitra, miala tsiny. Afaka manampy ahy ve ianao? Heveriko fa manana 16.04 aho ary te-hanavao ny libreoffice farafaharatsiny, tsy haiko ny manao azy. Misaotra tamin'ny valinteninao. Mirary ny soa indrindra